Warbixin Fashilishay Midawga Yurub & Qaadhaankii ay Suuqii Waaheen kaga qayb Qaadanayeen | Dhamays Media Group
Warbixin Fashilishay Midawga Yurub & Qaadhaankii ay Suuqii Waaheen kaga qayb Qaadanayeen
Hargeysa (DMG)- Ganacsade Ismaaciil Axmed Ibraahim Oo kamida ganacsatada Somaliland ah Aas-aasaha iyo Mulkiilaha Shirkadaha World remit iyo Sahamiye Foundation ayaa toosha ku iftiimiyey warbixin todobaadkan lagu daabacay boga internetka ee ururka midowga yurub taas oo lagaga hadlayey dabkii ka kacay suuqa waaheen iyo xadiga dhaqaalaha ay ku taageerayaan, warbixintan oo marka si qotodheer loogu daadago nuxurkeedu uu sawir khaldan ka bixinayo gurmadka loogu jiro dhaqaale ururinta dadkii masiibada dabku sahayatay ganacsigoodii ee suuqa waaheen.
Qoraal Kooban oo uu ku naqdiyey waxbadana ku iftiimiyey ganacsade Ismail Axmed ayaa uu ku yidhi sidan.
War saxaafadeed aad loo buunbuuniyey oo EU-du soo saartay ayaa lagu sheegay in ay deeq dhan €100,000 soo marin doonto hay’ad kale oo ganacsatada yaryar ee Waaheen ka caawin doona in ay iibsadaan “cunto iyo biyo” ganacsigoodiina dib u bilaabaan.
Warkan oo lagu daabacay bogga EU-da oo bishii ay booqdaan 60 malyuun ayaa wuxu bixinayaa sawir qaldan oo ah in ganacsata yaryar weli aan waxba loo qaban oo ay hay’ad sugayaan.
Waxay EU-du warka faafisay iyada oo og in ganacsatada yaryar loo qaybiyey lacag ka badan $2 malyuun oo ay dib u bilaabeen ganacsigoodii, ilaa haddana lacagaha ay Soomaalidu ku deeqday kor u dhaaftay $20 malyuun.
Marka laga jaro kharashyada hay’aduhu ku maamulaan deeqaha waxa laga yaabaa in inta soo hadhaa ay noqon karto oo keliya afur wadareed cuntada iyo biyaha la sheegay gaadhsiiya ganacsatada suuqa.
War saxaafadeedka oo aad looga soo shaqeeyey wuxu deeqdan yar ka dhigay mid ka miisaan weyn dhammaan wixii dadkeennu bixiyeen marka Google laga baadho gurmadkii suuqa.
Sahamiye Foundation ayaa soo gabogabeeyay wejigii labaad ee lacagihii loo qaybinayey dumarkii danyarta ahaa ee khasaaruhu ka soo gaadhay gubashadii Suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa.
Lacag dhan $313,700 ayaa loo kala diray 761 qof oo isugu jira 410 toddobaadkii hore lacag loo diray iyo 351 toddobaadkan la gaadhsiiyey lacagahaa deeqda ah.
Hawshan oo la bilaabay laba casho kadib markii suuqu gubtay waxay caawisay dumarka danyarta ah ee aan sugi karayn inta guddiyadu bilaabayaan bixinta lacagaha.
Ganacsatada yaryar ee lacagaha helay waxay durba kordhiyeen dhaqdhaqaaqii ganacsi ee sida khudaarta oo aad hoos ugu dhacday markii suuqu gubtay.
Midowga Yurub oo gurmad u fidiyey dadkii ku waxyeeloobay dabkii ka kacay suuqa Hargeysa ee Somaliland.
Komishanka Yurub ayaa 100 000 Euro ugu deeqay dhaqaale degdeg ah oo bini’aadantinimo si loogu gurmado qoysaska aadka u jilicsan ee ku waxyeeloobay dabkii ka kacay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa 1-dii April 2022. Dabkan oo loo malaynayo inuu ka dhashay koronto ayaa basbeelay.
Suuqaas oo ay ku dhaawacmeen toddobo iyo labaatan qof, waxaana burburay dhismayaal, dukaammo iyo goobo suuqyo ah. Dabka ayaa sidoo kale sababay hakad ganacsi oo halis galiyay nolosha boqolaal qof oo isugu jira beeraley, alaab-qeybiyeyaal, ganacsato iyo dhammaan dadka ka shaqeysta goobtaas.
Dhaqaalaha Midowga Yurub wuxuu ka taageeri doonaa ururka bisha cas ee Soomaaliyeed si ay u gaarsiiyaan taageerada ay aadka ugu baahan yihiin qoysaska, gaar ahaan wadhatada iyo mulkiilayaasha dukaamada yar yar ee ku waayay gabi ahaan noloshoodii dabka oo aan lahayn dhaq-dhaqaaq kale oo dakhli abuur ama shabakado bulsho oo ay ku tiirsan yihiin. Caawinta EU-da ayaa ugu horayn ku jiri doonta laba qaybood oo deeq lacageed oo dhan $295 iyo $95 siday u kala horreeyaan qoyskiiba.
Lacagtan ayaa u sahlaysa qoysaska inay ka iibsadaan cunto iyo biyo suuqyada u dhow oo ay dib u soo ceshadaan oo dib u bilaabaan ganacsigoodii. Hawlgalkan ayaa lagu beegsan doonaa oo mudnaan siin doona dadka aadka u jilicsan ee ay dhibaatadu saameysey, gaar ahaan haweenka ay madax u yihiin qoysaska caruur badan oo ku tiirsan, dadka naafada ah, bukaanada iyo waayeelka.
Khasaare hantiyeed iyo mid nololeed oo lama filaan ah ayaa sababay in qoysas badan oo dhibaatadu soo gaartay ay soo wajahday dhibaato baaxad leh.
Iyada oo loo marayo maalgelintan, ururka bulshada Bisha Cas ee Soomaaliyeed waxay bixin doontaa taageero bulsho
Mashruucan ayaa socon doona muddo afar bilood ah, ilaa dabayaaqada bisha Ogosto, waxaana ka faa’iidaysan doona 500 oo qoys oo ay sida ba’an u saameeyeen dabkii iyo burburkii suuqa Hargeysa.
Maalgelintu waa qayb ka mid ah tabarucaadka guud ee Midowga Yurub ee Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah ee Masiibooyinka (DREF) ee Xiriirka Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas iyo Ururada Bisha Cas (IFRC).
Makhribnimadii 1-dii April, waxa dab xooggani ka kacay suuqa Waaheen oo ah suuqa ugu weyn ganacsiga Somaliland. Ciidanka Ilaalada Dab-demiska Somaliland waxa ay xakamayn kari waayeen 16 saacadood ka dib markii uu dabkaasi kacay, waxana dabkan uu noqonayaa kii ugu xumaa ee soo mara Somaliland muddo tobanaan sano ah. Dabadeed, dabku wuxuu gabi ahaanba baabi’iyay ilaa 1 000 dukaan wuxuuna baabi’iyay in ka badan 4 200 oo dukaamo iyo miisas ah. In ka badan 17 000 oo qof, oo si toos ah ugu tiirsan suuqa, ayay saamaysay. 27 qof ayaa si xun ugu dhaawacmay dabka, waxaana loola cararay isbitaalka si xaaladooda wax looga qabto.
Komishanka Yurub wuxuu heshiis ergo bini’aadantinimo oo dhan €3 milyan la saxeexday Ururka Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas iyo Ururada Bisha Cas (IFRC) si ay u taageeraan Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah ee Masiibooyinka ee Federaalka (DREF).
Previous: Ujeedada kulan ay yeesheen Wefti ka Socda Dalka Turkiga & Gudiga Tacliinta Sare ee JSL
Next: War ka Farxiyay Da’yarta ku Nool Deegaanka Abaarso ee Galbeedka Hargeysa